June 6, 2020 NEWS 14
GAROOWE(P-TIMES)- Bangiga Horumarinta Afrika ee taageera howlaha dibu dhiska iyo soo kabashada Soomaaliya ayaa si adag uga soo jawaabay fariim Email ah oo uu Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni horey ugu diray, markii ay dhaceen Daadkii waxyeelada ka geystay magaalada Qardho ee gobalka Karkaar, taas oo ahayd dalab ka yimi xagga Puntland.
Madaxweyne Deni wuxuu ka dalbaday Bangiga Horumarinta Afrika in gacan laga siiyo dhibaatada dhacday oo dhaqaale toos ah loogu yabooho Puntland, isagoo diray dhammaan qiimeynta laga sameeyey arrimaha ku saabsan daadkii magaaladaas.
Ilo katirsan guddigii dawladda ee loo xilsaaray dhacdada Qardho ayaa sheegay in Madaxweyne Deni uu la wareegay dhammaan macluumadka la xariirta Daadkii Qardho wixii laga sameeyey, isagoo taasna sabab uga dhigayay in uu xooga saaro arrimaha gargaarkan.
Bangiga Horumarinta Afrika, ayaa jawaab u soo qoray Madaxweynaha Puntland Siciid Deni, waxayna sheegeen in aysan xariir lasameynin dawlad gobaleeydada, ayna arrimahan horumarinta iyo qorshayaasha ka wada hadlaan Xukuumadda dhexe ee Soomaaliya.
Bangiga ayaa u cadeeyey in madaxweynaha Puntland in ay kula talinayaan in ay arrimahan kala hadlaan Dawladda Faderaalka Soomaaliya, gaar ahaana wasaaraddaha ay khuseyso ee kala ah Qorsheynta, Iskaashiga caalamiga ah iyo Wasaaradda Maaliyadda.
Sidaas oo kale Bangiga ayaa qoraalka ay u direen Madaxweynaha Puntland Siciid Deni, waxay isna u direen isla Wasaaraddaha dawladda Faderaalka Soomaaliya, oo horey u bixiyey lacag dhan 1Malyan oo dollar, taas oo ay ku taageereen Dhacdadii magaalada Qardho.
Puntland ayaan wali waxba dhaqaale gaar ah ugu yaboohin xaaladda magaalada Qardho, sidaas oo kale dhaqaalaha la aruuriyey ayaan ilaa hadda dadka deegaanka ee dhacdadu sameysay waxba loogu qaban, qaarkood ayaanab cabasho muujinaya.
Qaran jecel says:
Adoo maamulo meel yar markaad dawalad is moodo xaalku waa iska saan qabiil qaran ma noqdee umada ciyaarta ha laga daayo danina puntland dan uma hayo
Siilka hooyadaa baa meel Yar oo qarmuun Badan ah
1.Marka hore badaw baad tahay an kala aqoon dhulka soomaaliya suu kala yahay iyo meesha ugu balaaran ama ugu weeyn.Khashiin yahoow soomaaliya maamul gobaleedka ugu dhulka weeyn waa puntlaan ee saas ula soco.war miyaadan ogeeyn from gaalkacyo to Calawla in ay isu jiraan 1,800 oo kilometers.Gaalkacyo iyo boosaaso waxay isu jiraan 1,200 oo kilo mitir.Boosaas iyo Garacadna waa ku dhawaad kun kilomitir.
Saas dalka u kala baro.
2.Tan labaad war xaggee buu joogaa qaranka ad sheeganaysid?Ma xamarta ay isku haystaan Moryaanta USC iyo Shabaab baad leedahay qaran baa ka jira?An kuu sheegee xiligaan xamar dawlad la sheegaa kama jirto.Sababtoo ah waxaa kala haysta Mooryaan qabiileed iyo Shabaab oo ayana isla qabiilkaas ka mida iyo meel yar oo ay ajaanib ku waar diyeyso Ina farmaajo iyo kuwa uu Laaluushka siiyo.
Waryaa ugu dambayn wakhtigaan xamar kama jirto dawlad soomaaliyeed ee fur dhagahaaga iyo indhahaba.Runta an kuu sheegee reer puntlaan waxba ugama baahna xamar iyo kuwa yiraahda Unukaa leh xamar.Reer puntlaan waxay diidayaan in ay sida Hargeysa yiraahdaan anagu MA NIHIN SOOMAALI.Soomaali baan nahay laakiin xamar waxba nooma yaaliin oo waxaan ka guuray 1991.Haddiise beelaha USC ay qirtaan qaladaadkii badnaa ee ay ka galeen soomaaliweeyn oo ay soo celiyaan maalkay hastaan waan ka wada xaajoonaynaa arimaha qaran soomaaliyeed.
Adeerow Hanaga been sheegin.
Ma jirto meel aanu Soomaalinimo kaga baxnay iyo meel aanu ka nidhi Soomaali ma nihin,waxase aad kamid tahay dadka Ku hadaaqa Somaliland waa Soomaali-diid!!!
Soomaalinimo waa Isir,waana loo dhashaa,lagaama saari karo,adna ma awoodid xataa hadaad doonto,waxase isaga kaa khaldan in Soomaalidu iyagoo ah hal qawmiyad oo ballaadhan,degtana Bariga Africa,wadaagana af,dhaqan,dhiig,hadana ay kala leeyihiin dawlado u kala gaar ah.
Somaliland haday tidhi dawlad gaar ah ayaan ahay,awlna ahaa,mana jirto cid kale oo ii talinaysaa ma Soomaalinimaday ka baxday???!!!
Hadaad dawladaada gaar u yeelato,gaarna uu kuu ahaado nidaamkaagu ma Soomaalinimada ayaa lagaa saarayaa,laguuna bixinayaa “Soomaali-diid’?!!!!
Ciddii Somaliya la wadaagi weyda nidaam ma Soomaali-diid baa?!!
Jabuuti soo dawlad gaar ah maaha,ma ka saari kartaa Soomaalinimada,mana ka xigsan kartaa?
Haddii ciddii Soomaaliya la wadaagi weyda nidaam Soomaali-diid Ku noqonayo,Jabuuti,NFD,SG waa Soomaali-diid!!!!!!
Soo sidaa maaha sidaad u fekeraysaa?!
Soomaali waa walaalo,aan kala maarmin,is tirsanaya intay dunidu jirto haba ka dhex jirto woxoogaa nacayb ah oo qabyaalad salka ku haysàayee,laakiin way kala lahaan karaan dawlado,wax uga xumaanayaana ma jirto,bal waxay keenaysaa wanaagooda maadaama ay Ku heshiin waayeen hal dawlad labadii dawladood ee midowga bilaabay (SOMALILAND & SOMALIA),laguna guul-daraystay in wax la wadaago,hadana aanay muuqan Soomaali si cadaalad ah u wada yeelan kara dawlad loo siman yahay,cadaalad ah,la wadaago dhibteeda iyo dheefteedaba.
Qawmiyadda Soomaalidu waxay leeyihiin Saddex dawladood,labona waxay ka tirsan yihiin Kenya iyo Itoobiya,waana sidii gumeystayaashii Africa qaybsaday u qaybiyeen shan qaybood.
Dani Zanzibari Waxaa Lagu Yidhi La hadal Wasiir JAMAL Iyo Dr Beyle.kkkk
Adeer qaran jecel ma tihide waxaa tahay farmaajo jecel
Deni wanaag buu sameeyey laakiin waxaan ugahay hadii Muuse Biixi sidaas sameen lahaa waad ku farxi lahayd
Qaran ma jeclide cuqdad Puntland ku dishaye u dhimo
Dani waa Madaxweynaha Puntland – in uu dadkiisa u qareemo waa ku amaanan yahay. Dadaalkiisu meel kaste ha la gaaree, meel uma yuurarayo Mohamed Siyaad iyo Villa Wardhiigley
Asc ragga somaaliyeedow,qabyaaladquruna oon meel cidnageeyeen baa idinmaxamartay,inaragana ku dhamaaday ee illahiin u toobadkeene,waamid mira kale,somaaliya wakhatigaan dowalad u taagan danta dalkabaa ka jirta ,we illaheey maamulgoboleedayaan ha dumiyo ,waa sadex waxa dadkii u af duubanyihiin ,puntland isaaqland iyo jubboland inshaallahaa ,was laga adkaanayaa ayagana. Maxaad ku taageereeyesaankuwaas,oo dano idiin ku jira ,puntaland ninja fadhiyaa suu jeebkiisa meal u gashafo buy u fadhiyaa ,isaaq suu kali waxa u cunobuu u fadhiyaa,jubada dhirtiiba dhamee waa Kenyan, dowalada nabad iyo nolol allow noo daa,khayer very noqoneryesaa
Kuwan dad xunka ah ee page kan qora, waxaysan ogayn African Development bank waxay shaacisay in ay hayaan lacag dhan 1.5 million ay bacsheen non-member countries (micnaheedu waa deeq) bankiga loogu dhiibay wadamada ay saameeyeen ayaxu (desert locust) waxaa ka faaiidaystay Djibouti, Ethiopia & Kenya. Farmaajo dan kama dhibaatada haysata dadkiisa umaana maqna. Lacagtaasna waa bacday ‘exhausted” sida warqada ku qoran oo Somalia xataa haddii Farmaajo codsan lahaa waxba ma hesheen
Ilaahayna been baad u sheegtay Naftaadana Been baad ku Maawelisaa xagay ka shaqaysaa waxan aad Dawlad ugu yeedhay ee Amosomaia, adeerkaa Ina Afweyne ama Armaajo Markuu suuliga gelayo Adoon xun oo Ugandha ah ayay u fura muftaaxa xitaa meeshuu seexdo waa loo furaa laguna ilaaliyaa, Adeerkaa Xalane Ayaa,Zoomaalia Xalane ayuu fadhiyaa madaxweynaheedu, Armaajo waa Fake President Waa indhasarcaad dadka Cawaanka ah sidaadoo kale loogu sheekeyo waa madaxweyne, xamar xitaa inta badan Alshabaab ayaa Xukumay waataas maalin walba Hoobiyaal ku garaacay,, Somali Maryooley dowladi ka dheer hana sugin inta ay naga daba laalaadaan hadaanu nahay Jamhuriyada Barakeysan ee Somaliland, markaa hanagu Xoqan idinkama mid nihin Waligeedna idinkama mid noqon mayno Never Ever hasugin taas. Way dhimanayaan hadaney somaliland wax ka sheegin bal maxaa nadaba dhigey,waar nadaaya maxaa nadaba dhigey,bal iyagiibaa 5 maamul goboleed ukala baxay oo aan is arki karin markay Midnimo beri hore dhimatay ka sheekeynayaan.
Kkk qofkii aan aan fahmi karin run buu u qadan woraalka beenta ah ee la ee qoraal kale la dul saaro . Wax ka jiraa majiraan waa been iyo wax laysu geegeeyay oo kooxda villa wardhiigley usoo dhiibeen cayayaanka baraha bulshada ee Farah Gaylan farah faaruq ka ka midyahay. Puntland mashaariicda ugu badan waxaa kawada World Bank xiriir fiican ayaana kala dhaxeeya Puntland, bank Africa development maha bank qudhiisa charity ku shaqeeya oo caalamka tuugsada Puntland na wax ma waydiisan waligeed waadna ku fashilanteen arinkaas.waxaa idiinka wanaagsanaan lahayd idinkoo dhaha World bank.